အရှေ့တောင်အာရှဈေးကွက်တချို့မှာမိတ်ဆက်ပြီးနေပြီဖြစ်တဲ့ OPPO F7
25 Apr 2018 . 12:42 PM
လက်ရှိအချိန်မှာ OPPO ကုမ္ပဏီရဲ့ စမတ်ဖုန်းအသစ်ဖြစ်တဲ့ OPPO F7 ဟာ အရှေ့တောင်အာရှဈေးကွက်တချို့မှာမိတ်ဆက်နေရာယူနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဖုန်းကို အန္ဒိယဈေးကွက်အတွက် အစောဆုံးအနေနဲ့ March 26 တွင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီး အင်ဒိုနီးရှားဈေးကွက်ကိုတော့ April 17 ရက်မှာမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
F7 ဟာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း ပထမဦး Noth ပါဝင်လာတဲ့ OPPO စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်သလို Design၊ Color အနေအထားဟာလည်း ယခင်မြင်နေကျပုံစံတွေလိုမဟုတ်ပဲ Glass Type Body အဖြစ်အသွင်ပြောင်းလဲလာပါတယ်။ OPPO F7 ရဲ့ အဓိက Feature တွေကတော့ 25MP ရှိတဲ့ AI Selfie Camera၊ 6.23 Inch အရွယ် (19:9) Display နဲ့ လက်ရှိ Android OS ရဲ့အမြင့်ဆုံး Version ဖြစ်တဲ့ Oreo (8.1) တို့ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အသစ်အဆန်းတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်ပြီး မိမိရဲ့ ပင်ကိုယ်အလှတွေကို အကောင်းဆုံးဖော်ပြပေးနိုင်မယ့် 25MP ရှိတဲ့ Selfie Camera ကတော့ ခုခေတ်လူငယ်တွေအတွက် အတော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေပါတယ်။၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွက်ခေတ်နဲ့အမီလိုက်နေတဲ့ စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးပါ။
OPPO F7 ကို မလေးရှားနဲ့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာလည်း အခုလ ၁၉ရက်နေ့မှာမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အရင်းနှီးဆုံး အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ မနေ့က (၂၄.၄.၂၀၁၈) မှာမိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အရှေ့တောင်အာရှဈေးကွက်အတော်များများမှာ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ F7 ဟာ မြန်မာနိုင်ငံဈေးကွက်ကိုတော့ဝင်ရောက်လာခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံက OFans တွေကတော့ F7 ကိုမျှော်နေလောက်ပြီထင်ပါတယ်။ သင်ရော OFans တစ်ယောက်ဆိုရင် OPPO F7 ကိုဝယ်ချင်ပါသလား? OPPO F7 မှာပါတဲ့ ဘယ်အချက်ကို သဘောအကျဆုံးဖြစ်မလဲ? ဖြေပေးခဲ့ကြပါဦး…
အရှတေ့ောငျအာရှဈေးကှကျတခြို့မှာမိတျဆကျပွီးနပွေီဖွဈတဲ့ OPPO F7
လကျရှိအခြိနျမှာ OPPO ကုမ်ပဏီရဲ့ စမတျဖုနျးအသဈဖွဈတဲ့ OPPO F7 ဟာ အရှတေ့ောငျအာရှဈေးကှကျတခြို့မှာမိတျဆကျနရောယူနပွေီဖွဈပါတယျ။ အဆိုပါဖုနျးကို အန်ဒိယဈေးကှကျအတှကျ အစောဆုံးအနနေဲ့ March 26 တှငျမိတျဆကျပေးခဲ့ပွီး အငျဒိုနီးရှားဈေးကှကျကိုတော့ April 17 ရကျမှာမိတျဆကျပေးခဲ့ပါတယျ။
F7 ဟာ ၂၀၁၈ ခုနှဈအတှငျး ပထမဦး Noth ပါဝငျလာတဲ့ OPPO စမတျဖုနျးတဈလုံးဖွဈသလို Design၊ Color အနအေထားဟာလညျး ယခငျမွငျနကေပြုံစံတှလေိုမဟုတျပဲ Glass Type Body အဖွဈအသှငျပွောငျးလဲလာပါတယျ။ OPPO F7 ရဲ့ အဓိက Feature တှကေတော့ 25MP ရှိတဲ့ AI Selfie Camera၊ 6.23 Inch အရှယျ (19:9) Display နဲ့ လကျရှိ Android OS ရဲ့အမွငျ့ဆုံး Version ဖွဈတဲ့ Oreo (8.1) တို့ပါဝငျမှာဖွဈပါတယျ။
အသဈအဆနျးတှကေိုကွိုကျနှဈသကျပွီး မိမိရဲ့ ပငျကိုယျအလှတှကေို အကောငျးဆုံးဖျောပွပေးနိုငျမယျ့ 25MP ရှိတဲ့ Selfie Camera ကတော့ ခုခတျေလူငယျတှအေတှကျ အတျောလေးစိတျဝငျစားစရာကောငျးနပေါတယျ။၂၀၁၈ ခုနှဈအတှကျခတျေနဲ့အမီလိုကျနတေဲ့ စမတျဖုနျးတဈလုံးပါ။
OPPO F7 ကို မလေးရှားနဲ့ ဖိလဈပိုငျနိုငျငံမှာလညျး အခုလ ၁၉ရကျနမှေ့ာမိတျဆကျပေးခဲ့ပွီးတော့ မွနျမာနိုငျငံနဲ့အရငျးနှီးဆုံး အိမျနီးခငျြးနိုငျငံဖွဈတဲ့ ထိုငျးနိုငျငံမှာတော့ မနကေ့ (၂၄.၄.၂၀၁၈) မှာမိတျဆကျခဲ့ပွီးဖွဈပါတယျ။ အရှတေ့ောငျအာရှဈေးကှကျအတျောမြားမြားမှာ ရောကျရှိနပွေီဖွဈတဲ့ F7 ဟာ မွနျမာနိုငျငံဈေးကှကျကိုတော့ဝငျရောကျလာခွငျးမရှိသေးပါဘူး။ မွနျမာနိုငျငံက OFans တှကေတော့ F7 ကိုမြှျောနလေောကျပွီထငျပါတယျ။ သငျရော OFans တဈယောကျဆိုရငျ OPPO F7 ကိုဝယျခငျြပါသလား? OPPO F7 မှာပါတဲ့ ဘယျအခကျြကို သဘောအကဆြုံးဖွဈမလဲ? ဖွပေေးခဲ့ကွပါဦး…